गृहमन्त्रीको राजीनामा माग | गृहपृष्ठ
Home समाचार गृहमन्त्रीको राजीनामा माग
गृहमन्त्रीको राजीनामा माग
असोज ९, काठमाडौं (अस) । एमाले भ्रातृ सङ्गठन नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठनले गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको राजीनामा मागेको छ । इस्लामिक सङ्घ नेपालका महासचिव फैजान अहमदको हत्याको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सङ्गठनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेको छ । सङ्गठनका महासचिव ताज मोहम्मद मियाँले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख केदार रिजाललाई कारबाहीका नाममा सरुवा गरेर सरकारले नाटक गरेको बताए । मियाँले मुस्लिम समुदाय आफ्नो सुरक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
अहमदको सोमबार दिउँसो राजधानीको घण्टाघरमा पौने २ बजे अपरिचित दुई व्यक्तिले गोली हानी हत्या गरेका थिए । अहमदलाई तत्कालै वीर अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकहरूले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए । गोली प्रहार गर्ने दुवै व्यक्ति कमलादीतर्फ फरार भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । घटनास्थल काठमाडौं महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयबाट ५० मिटर मात्र टाढा भएको बताइएको छ ।
सङ्घीयतामा पनि स्थानीय निकाय चाहिन्छ : रायमाझी
असोज ९, काठमाडौं (अस) । एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि स्थानीय निकाय चाहिने बताएका छन् । उनले सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निकायको ठूलो भूमिका रहने धारणा राखे । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको १९औं वार्षिकोत्सव समारोहको ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री रायमाझीले प्रतिष्ठानलाई प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाइने बताए । प्रतिष्ठानलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उनले जानकारी दिए ।
‘चारबुँदे सहमति राष्ट्रवादी’
असोज ९, काठमाडौं (अस) । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएको चारबुँदे सहमति मुलुकलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने राष्ट्रवादी भएको बताएका छन् । न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६६औं महासभामा भाग लिएर सोमवार फर्केका भट्टराईले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भने, ‘हामी चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध छौं ।’ राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएमा समायोजन, वर्गीकरण र तह निर्धारणलगायत प्रक्रिया ४५ दिनभित्र सकिने उनको धारणा थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीभित्र को बहस र छलफलले सरकारको कामकारबाहीमा असर नपर्ने तर्क गरे । उनले एमाओवादीमाथि रहेको आतङ्ककारीको बिल्ला हटाउन अमेरिकी अधिकारीहरू सकारात्मक भए पनि प्राविधिक कारणले रोकिएको बताए । महासभामा मुख्य रूपमा नेपाल शान्तिप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरालाई विशेष महत्त्वका साथ आफूले उठाएको डा. भट्टराईले बताए । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान कि मुनसँग शान्तिका प्रतीक गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्धमार्गीहरूको तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
‘पार्टी विवाद मिलाउन पहल’
असोज ९, काठमाडौं । एमाओवादीमा देखिएको विवाद मिलाउन पहल भइरहेको सो पार्टीका सचिव सीपी गजुरेलले बताएका छन् ।
रासससँगको कुराकानीमा विवाद अन्त्यका लागि आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाइएको जानकारी पनि उनले दिए । पार्टी स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले सो अभियान शुरू गरेको गजुरेलले बताए । महराले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग आइतवार आफ्नै निवास भक्तपुरमा विवाद समाधानका विषयमा छलफल गरेका थिए । सचिव गजुरेलका अनुसार महराले सोमवार पार्टी स्थायी समिति सदस्यसँग सामूहिक छलफल गरेका छन् । ‘अध्यक्षले सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘नेता महराले पनि सोहीअनुसारको छलफल गर्नुभएकाले छिट्टै विवाद अन्त्य हुने विश्वास छ ।’ रासस
सुपको विकासमा एकजुट बनौं : देउवा
असोज ९, काठमाडौं (अस) । काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि सबै पार्टी एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नु क्षेत्रीयता र साम्प्रदायिकता नहुने उनको तर्क थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार एवम् आर्थिक हिसाबले सुदूरपश्चिम क्षेत्र पिछडिएको भन्दै देउवाले उक्त क्षेत्रको विकासका लागि एकजुट हुन आह्वान गरेका हुन् । राजनीतिक रूपमा आ-आफ्नो पार्टीको विचार फरकफरक भए पनि सुदूरपश्चिमको विकासका लागि भने एकजुट हुनुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखेका थिए । सुदूरपश्चिम पत्रकार समाजले सोमवार राजधानीमा आयोजित दशैं शुभकामना एवम् सम्मान कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले खस जातिको विशेषता बोकेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए ।